Isikhwama sokuhlunga sePolypropylene - Umphakeli wesihlungi weChina Polypropylene, Factory -Sffiltech
izikhwama zokuhlunga ze-polypropylene ezenziwe ngopende we-polypropylene wazwakala, owenziwe ngentambo ye-polypropylene.
Ukuhlunga kuzizwe kunesisindo esivamile yi: 450gsm, 500gsm, 550gsm
Qeda Ukwelashwa kwesihlungi se-polypropylene uzizwe: Usingethe, uqukethe ikhalenda, isethi yokushisa, i-wireless iron wire (anti static)
a) Intengo yokuncintisana
b) ikwazi ukumelana nama-80 deg. lokushisa endlini esikhwameni
Isikhwama sokuhlunga sothuli:
Njengoba yonke lemifanekiso inezimpawu zayo nemikhawulo,
lapho sikhetha izinto zokuhlunga zezikhwama zokuhlunga zothuli,
kufanele sazi imingcele elandelayo: izinga lokushisa, elinomswakama,
ububanzi bokuthi uthuli, izakhiwo zamakhemikhali wegesi, uthuli olweqile, izinhlaka zemishini zokuhlunga.
Ngokuvamile, izikhwama zokuhlunga zothuli ze-SFF zisetshenziswa kabanzi ekuhlanjululweni kwegesi yokuchitheka komoya, uthuli olusebenzayo, izihlungi zegesi eziphezulu zokushisa.
Ifemu lokuhlunga lesikhwama seShanghai likuhlinzeka ngesisombululo esihle ngokwezimpawu zothuli, sikusize ukhethe izinto ezinhle zokuhlunga ukuze uzuze ukuhlunga okusebenzayo okusebenzayo.
Isihlungi esidingekayo se-polypropylene fiber sazizwa sikhetha ngokuvamile i-3 d noma i-6 d polypropylene staple fiber, ngesilika elinamandla amakhulu elenzelwe ukuqinisa indwangu yesisekelo, i-acupuncture igcizelela ubuchwepheshe bokwelashwa kwangemuva njengokukhanya, ukushisa nengcindezi yokuphothula ukwakhiwa.
I-polypropylene fiber incono kune-polyester fiber enhle acid, i-alkali nethambile lokuthambisa, ngakho-ke isikhwama sokuhlunga seplypropylene esidingeka sisetshenziswa ngokuvamile sisetshenziswa ekushiseni komoya kaphethiloli ngaphansi kwe-100 ℃ ne-asidi noma i-asidi, i-alkalinity kanye nezikhathi eziphezulu zensimu enkulu Ukwahlukaniswa okuhle I-polypropylene fiber edingekayo yokuhlunga yizwa isikhwama sothuli ngokuvamile ikhetha i-3 d noma i-6 d polypropylene staple fiber, ngensimbi enamandla amakhulu eyenziwe ukuqinisa indwangu eyisisekelo, i-acupuncture igcizelela ubuchwepheshe bokwelashwa kwangemva kokukhanya njengokukhanya, ukushisa nengcindezi yokuqedela ukwakhiwa.
Isihlungi se-polypropylene fiber esidingeka sazizwa sisetshenziselwa kakhulu izinsimbi zensimbi, izimayini, uphethiloli, amakhemikhali, amakhemikhali amakhemikhali, umuthi nezimboni zokudla emkhakheni wokuhlukanisa ngokuqinile noketshezi.